Facebook ချစ်သူနှင့် အပြင်မှာချိန်းတွေ့၊ အဆင်မပြေသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဓာက်ဆီလောင်းမီးရှို့ – Myanmar Breaking News
Facebook ချစ်သူနှင့် အပြင်မှာချိန်းတွေ့၊ အဆင်မပြေသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဓာက်ဆီလောင်းမီးရှို့ ပြီး သေကြောင်းကြံစည်မှု မန္တလေးတွင်ဖြစ်ပွား….
ရှမ်းပြည်နယ် နောင်ချိုမြို့နယ်မှအမျိုးသားတဦးသည် Facebook ပေါ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့နေ ချစ်သူမိန်းကလေးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံရာ အဆင်မပြေသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ ၍ သေကြောင်းကြံမှု ဇွန် ၁၉ ရက် ညပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နောင်ချိုမြို့နယ် ဝက်ဝံကျေးရွာနေ ညီညီအောင် (၃၄) နှစ်က ၎င်းနှင့် Facebook တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မှန်တန်းရပ်ကွက် တိုးချဲ့ (၃) တွင် အိမ်ငှားနေထိုင်သူ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် မ—- အား လာရောက်တွေ့ဆုံရာ မပြေလည်သဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဓာက်ဆီလောင်းမီးရှို့၍ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း၊ အနီးဝန်းကျင်နေပြည်သူများက ဝိုင်းဝန်ထိန်းသိမ်းကာ မီးငြှိမ်းသတ်ကာ မေတ္တာမြင့်မိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းယာဉ်ဖြင့် အမရပူရမြို့မဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြို့နယ်ဆေးရုံမှတဆင့် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အရေပြားဌာနသို့ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံရွယ်သူ ညီညီအောင်တွင် အရေပြားမီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိပြီး အသက်အန္တရာယ်မရှိ(မစိုးရိမ်ရ)အား အမရပူရမြို့မရဲစခန်းက မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံမှုဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
Credit – #NewsWatch
Facebook ခဈြသူနှငျ့ အပွငျမှာခြိနျးတှေ့၊ အဆငျမပွသေဖွငျ့ မိမိကိုယျကို ဓာကျဆီလောငျးမီးရှို့ ပွီး သကွေောငျးကွံစညျမှု မန်တလေးတှငျဖွဈပှား….
ရှမျးပွညျနယျ နောငျခြိုမွို့နယျမှအမြိုးသားတဦးသညျ Facebook ပျေါတှငျတှဆေုံ့ခဲ့သညျ့ မန်တလေးမွို့နေ ခဈြသူမိနျးကလေးအား သှားရောကျတှဆေုံ့ရာ အဆငျမပွသေဖွငျ့ မိမိကိုယျကို ဓာတျဆီလောငျးမီးရှို့ ၍ သကွေောငျးကွံမှု ဇှနျ ၁၉ ရကျ ညပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ နောငျခြိုမွို့နယျ ဝကျဝံကြေးရှာနေ ညီညီအောငျ (၃၄) နှဈက ၎င်းငျးနှငျ့ Facebook တှငျ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ့ မှနျတနျးရပျကှကျ တိုးခြဲ့ (၃) တှငျ အိမျငှားနထေိုငျသူ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ မ—- အား လာရောကျတှဆေုံ့ရာ မပွလေညျသဖွငျ့ မိမိကိုယျကို ဓာကျဆီလောငျးမီးရှို့၍ သကွေောငျးကွံစညျခဲ့ကွောငျး၊ အနီးဝနျးကငျြနပွေညျသူမြားက ဝိုငျးဝနျထိနျးသိမျးကာ မီးငွှိမျးသတျကာ မတ်ေတာမွငျ့မိုရျလူမှုကူညီရေးအသငျးယာဉျဖွငျ့ အမရပူရမွို့မဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး၊ မွို့နယျဆေးရုံမှတဆငျ့ မန်တလေးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ အရပွေားဌာနသို့ ဆကျလကျပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ မိမိကိုယျကို သကွေောငျးကွံရှယျသူ ညီညီအောငျတှငျ အရပွေားမီးလောငျဒဏျရာရရှိပွီး အသကျအန်တရာယျမရှိ(မစိုးရိမျရ)အား အမရပူရမွို့မရဲစခနျးက မိမိကိုယျကိုသကွေောငျးကွံမှုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားကွောငျး သိရသညျ။